हामीले गुलियो खाँदा किन किराले दाँत खान्छ ? – email khabar | Latest news of Nepal
हामीले गुलियो खाँदा किन किराले दाँत खान्छ ?
प्रकाशित : २०७३ वैशाख ५ गते ५:०८
डा सुमनराज ताम्राकार
काठमाडौं–हाम्रो शरीरको पाचन क्रियाका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न अङ्गहरु मध्ये दाँत पनि एक हो । वयस्क मानिसहरुमा तल्लो र माथिल्लो बङ्गारामा गरी ३०–३२ वटा दाँतहरु ह्ुन्छन् भने बच्चाहरुमा १८ देखि २० वटा दाँतहरु हुन्छन् । वयस्कहरुको दाँजोमा हेरचाह नपु¥याएको खण्डमा बालबालिकाहरुमा पनि दाँतको समस्या हुन्छ ।
गुलियो खानेकुरा खायो भने दाँत किराले खान्छ भन्ने धारणा व्याप्त छ । यो कुरा आंशिक रुपमा सत्य छ । हामीले खाने विभिन्न खालका खानेकुराहरु मध्ये खानेकुरा खाएपछि यसका स–साना कणहरु हाम्रा पछिल्ला दाँतको माथिपट्टि वा दाँतहरुको बिचमा अड्किन्छ । कथंकदाचित हामीले नियमित रुपमा दाँत माझेनौं वा दाँतको सरसफाई गरेनौँ भने ती खानेकुराका कणहरु कुहिएर एसिड ९अम्ल० उत्पादन हुन्छ । जसले गर्दा क्रमशः दाँत खिइँदै जान्छ । एसिड उत्पादन गर्न मुखमा रहेका विभिन्न खालका किटाणुहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
हाम्रो दाँतको विभिन्न तहहरु हुन्छन्, जसमध्ये सबभन्दा बाहिरको इनामेल नामक तह निकै साह्रो हुन्छ । तर, अम्लका कारण दाँतका विभिन्न तह खिइँदै गएर नसा लाई पनि असर पु¥यायो भने हामीले तातो वा चिसो खानेकुरा खाँदा दाँत सिरिङ्ग हुन्छ ।
दाँतमा खानेकुरा अड्किन नदिन बिहान र बेलुका खाना खाइसकेपछि दाँत माझनु बढ्ता लाभदायक हुन्छ । त्यसमाथि पनि राति खाना खाइसकेपछि दाँत माभm्नु बुद्धिमानी हुन्छ । अन्य बेला विशेष गरी माथि उल्लेखित खानेकुरा खाएपछि कम्तिमा मुख चाहिँ राम्ररी कुल्ला गनुपर्छ ।
तुलनात्मक रुपमा बालबालिकाहरुमा दाँत किराले खान समस्या बढी हुने हुनाले नियमित रुपमा दन्त चिकित्सकलाई जँचाउनुपर्दछ । आठ, दश वर्षदेखि स्थायी प्रकारका दाँतहरु आउन थाल्ने हुनाले सुरुका दूधे दाँत किराले खाएको छ भने अस्थायी प्रकारको सिमेन्ट भर्न लगाउनुपर्छ । किनकी दूधे दाँतमा किराले बढ्ता असर गर्यो भने जरालाई असर गर्न सक्दछ । यस्तो परिस्थितिमा पछि स्थायी तवरले आउने दाँतहरुमा पनि दखल पर्न सक्दछ । जुनसुकै ब्रान्डको मञ्जन भए पनि हुन्छ । तर बालबालिकाहरुमा नियमित रुपमा दाँत माझ्ने बानी बसाल्नुपर्ने सम्बन्धित चिकित्सकहरु सल्लाह दिन्छन् । साभारःस्वास्थ्य खबर पत्रिका
बालबालिकाको नाटक प्रतिभा